Xiaomi CC9 ama: ọkwa nke ahịrị ọhụrụ | TeraNews.net
Xiaomi CC9 ama: ọkwa nke ahịrị ọhụụ
na-ede akwụkwọ Ozi Tera E bipụtara 02.07.2019
Nnukwu ndị China ewerewo ọnọdụ siri ike n'ahịa ụwa maka mmepụta ekwentị dị elu ma dị ọnụ ala. Ugbu a ọ bụ oge iji gaa ọhụụ. Xiaomi CC9 smartphone, ma ọ bụ kama otu ngwaọrụ dị njikere iji merie obi ndị ọrụ.
Usoro ohuru nke onye China mepụtara nwere otutu ihe omume: CC9, CC9e na CC9 Meitu Edition. Ngwaọrụ niile dabere na Mi 9, ma ọ bụ kama nke ahụ, bụ nsụgharị flagship zuru oke. Site na otu ọdịiche - kama nke ike processor processor nke ike nke Qualcomm Snapdragon 855, ngwaahịa ọhụrụ ahụ natara Snapdragon 710.
Xiaomi CC9 ama: uru
Ndị China bụ ndị a na-ebu amụma. Siaomi maara otu esi echekwa ma ghara idafu onye ahia. CC9 nwere ụdị Mi9 AmoLED 6,39 inch FullHD ngosipụta + ihuenyo nwere nyocha akara aka. 600 enyo enyo cd / m2.
Ndị ọrụ chọrọ ezigbo njikwa - enweghị nsogbu ọ bụla. Igwefoto bụ isi bụ Sony IMX586 nwere mkpebi nke 48 MP, na igwefoto n'ihu na 32 MP nwere oghere F / 1,6. Ihe nkwụnye NFC, ihe ntanetị mkpuchi, ụda Hi-Res HD - ọkọlọtọ setịpụrụ maka ndị smartphones nke oge a.
Ma na nnwere onwe, Xiaomi CC9 smartphone ọbụna gabigara flagship Mi 9. Onye rụpụtara wunye batrị ya na ikike nke 4030 mAh. Nyere na enwere “Snapdragon 710 processor nke“ adịghị ike, ihe ọhụụ ga - egosipụta ọrụ ogologo oge na otu ụgwọ.
Xiaomi kwuru na ama a ga-ere ya na agba ato. “Sparks nke anyanwụ dị na snow” - dị ka ọcha, na ọdịiche ojii ojii, yana akara anụnụ anụnụ sitere na spirals mbinye aka. Onye isi ụlọ ọrụ ahụ, Lei Zun ekwupụtakwala ọnụ ahịa ekwentị. Ego kacha nta nke ụdị 6 / 64 bụ dollar US $ 260. Ekwentị mkpanaaka nwere 6 GB nke RAM na 128 flash - 290 $. Ahịa bụ maka ahịa ndị China. Nwere ike ịzụta ekwentị ebe a.
HUAWEI nova 5T: ama ama na-enweghị ọnụ ma dị elu
Sony Xperia 1 ama - ekwentị kpochapụwo
Xiaomi Mi 10 na Mi 10 Pro smartphones: nyochaa, echiche
TikTok zuru ohi ozi nke ekwentị
Otu esi ekiri Youtube na-enweghị mgbasa ozi: PC, ama
LG Stylo 6 Ekwentị mkpanaaka nwere nnukwu Ngosipụta na Ndenye aka